Nambaran’ny delegen’ny boriborintany fahefatra fa ny tsipika mavo dia natokana ho an’ireo mpivarotra ara-dalàna fa ireo tsy ara-dalàna kosa tsy maintsy esorina. Tsy manapaka na manimba ny fitadiavan’ireo mpivarotra ny kaominina fa miezaka kosa mitady ny toerana hametrahana azy ireny, hoy hatrany ny delege. Miezaka ny mandamina tsena miaraka amin’ny prefe, ny polisin’ny tsena, ny polisy nasionaly ary ny polisy misatro-mavo ny kaominina, mba hisian’ny rindran-damina, hoy izy. Tsy maintsy atao izay fanatsarana sy fandaminana ny tsena izay, hoy hatrany ny fanazavana. Tokony hanaraka ny fitsipika apetraka koa ireo mpivarotra, hoy ny delege. Raha sanatria ka misy izay fivoahana amin’ny faritra natokana ho azy ireo izay, dia misy ireo tompon’andraikitra manala izany. Misy mpitondra ny tanàna, ka tsy tokony hanao izay saim-patany ireo mpivarotra fa mba hanaraka ny fandaminana apetraka. Ny mpitondra koa an-kilany, dia miezaka ny mitady vahaolana ho an’ireo mpivarotra hatrany, hoy ny fanazavan’ny delege.